Kala qaybsanaan weyn oo ka dhalatay weerarkii Gaalkacyo - BBC News Somali
Kala qaybsanaan weyn oo ka dhalatay weerarkii Gaalkacyo
Lahaanshaha sawirka Radio Dalsan
Image caption Baraha bulshada ayey tan iyo shalay dooddan ka socotay
Weerarkii shalay ka dhacay xarunta uu Cabdiweli Sh. Cali Cilmi Yare ku lahaa magaalada gaalkacyo wuxuu noqday mid dhaliyey dood baraha bulshada ku dhex martay dad taageerayey ficilka Shabaab ay sameeyeen, kuwo wadaadka diiddanaa laakinse aan taageersanayn Al Shabaab, iyo kuwo gebi ahaanaba ka soo horjeeday wixii dhacay.
Waa markii ugu horraysay ee dood noocaas ah la arko.
Dadka doodahaas ka qayb qaatay waxaa ka mi dahayd gabar hambalyaysay weerarkii ka dhacay gaalkacyo, hase yeeshee saacado ka dib walaalkeed ku weyday weerar kale oo isla shalay ka dhacay xaafadda kaawo Godey ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Image caption Sacdiya waxay u riyaaqday weerarka Gaalkacyo, waxayse walaalkeed ku weyday kii Muqdisho
Waa kuma Sh Cabdiwali oo maanta Gaalkacyo lagu dilay?
Sheekh Cabdiweli Cilmi Yare iyo dad badan oo kale oo Gaalkacayo lagu laayay
Laakin fikradaas mid ka duwan waxaa qaba wiil isbarbar dhig ku samaynaya wadaadka la dilay iyo hogaamiyihii labaad ee AlShabaab oo iminka ah murashax u taagan tartanka madaxtinimada ee Koofur Galbeed.
Image caption Cadceed wuxuu is barbar dhigay Sh. C/weli iyo Abuu Mansuur
Fikraddan soo socota qofka qaba wuxuu diiddan yahay in rabshad wax lagu xalliyo. Wuxuu kaloo la yaabban yahay "in ay jiraan dad taageersan fal lagu xasuuqay dad Soomaaliyeed", wuxuu halka ugu dambaysa ku soo gabagabaynayaa ISKA JIRA AL SHABAABKA QARSOON.
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q Abdiweli Ibrahim
SHOW FACEBOOK ARGAGIXISO AYAA BUUXDA: Waxaa wax lala yaabo ah in kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab fal ay xasuuq ku...
Posted by Abdiweli Ibrahim Aden on Monday, 26 November 2018
Dhammaadka Facebook daabacaadda qore Abdiweli Ibrahim
Shiine Akhyaar waa fanaan Soomaaliyeed, wuxuuna ka xun yahay weerarkii Gaalkacyo ka dhacay.
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q Shiine
warbaahinta ajnabiga ayaa Ka cinwaan quruxsan kuwa somalida waxad ba moodaa warbaahinta Somalida in ay qiil usamaynayan...
Posted by Shiine Akhyaar on Monday, 26 November 2018
Dhammaadka Facebook daabacaadda qore Shiine
Laakinse waxaa jira dad u riyaaqay in falkaas ay sameeyeen Al shabaab. Waa markii ugu horraysay ee la arko dood noocaas ah oo boqollaal qof ay qabaan. Doodda hoos ku taalla waxay ka turjumaysaa doodahaas.
Xuquuqda Sawirka Cabdifitax Cabdifitax
Kala argti duwanaanta qaarkeed waxay keentay in xitaa ku digasho ay dadka qaar soo dhigaan baraha bulshada, iyo qaar laga naxo oo sharci ahaan aysan sax ahayn in la soo bandhigo.
Arrin kale oo ay mudan tahay in la xuso ayaa ah in magacyada dadka qaar ay yihiin kuwo been abuur ah ama dad haybtooda qariyey si aan loo aqoonsan. Laakin waxaa soo baxaysa in ay jiraan dad taageersan Al Shabaab.